သူတို့ပြောသည့်အတိုင်း, “လန်ဒန်မှာနေမကောင်းတဲ့နေ့ကတခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုကောင်းတဲ့နေ့ထက်ပိုကောင်းတုန်းဘဲ” ဒါပေါ့, လန်ဒန် မတ်လလည်ပတ်ရန်ဥရောပ၌ရှိသောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနေရာများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ရမည်.
အသစ်ကဘီယာအမြည်း, ဘီယာခရီးစဉ်တက်ရောက်ရန်, နှင့်အခြား cider နှင့်အတူရောနှော, ဘီယာ, ဒါပေမယ့်, နှင့်လန်ဒန်ဘီယာရက်သတ္တပတ်မှာ lager ပရိတ်သတ်တွေ. TBC အဖွဲ့
လန်ဒန်မှာမတ်လသွားရောက်နိုင်ရန်ဥရောပ၌ သာ. ကွီးမွတျသောအရပ်တို့ကိုမများအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ယူ ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန် နှင့် သင့်ကိုလမ်းညွှန်ပါ လန်ဒန်မြို့ရှိအရာပေါ်မယ့်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ဇာတ်စင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖမ်း ပြဇာတ်ရုံလမ်းညွှန်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#မတ်လ #marchtraveleurope europetravel နွေဦး trainjourney ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား netရာဝတီ uktravel